Banyere Anyị - iwu Motor Co., Ltd.
Changzhou iwu Motor Co., Ltd ike na 2010, na abụọ n'ichepụta osisi. Ya kwa afọ mmepụta apụghị iru n'elu 2 nde nkeji, nke 200 ọrụ na 50000 square mita nkwakọba. Ọ nwere 1 European alaka ụlọ ọrụ dị na 2 mpụga itieutom na China.is a Micro-moto n'ichepụta enterprise na ọhụrụ management nlereanya na ike oru ike. Professional R & D na mmepụta ngwakọ stepper Motors, DC brushless Motors, gia igbe Motors, servo Motors, draịva na yiri eletriki akara usoro.
Iwu Motor na-agba mbọ na-enyere ndị ahịa niile ọrụ igbo mkpa nke ugbu a na-eme n'ọdịnihu ọha mmadụ, na ike na-enye ọkachamara OEM ọrụ iji hazie na-emepụta elu àgwà ngwaahịa maka ndị ahịa.
More karịa ọganihu, na-akparaghị ókè ọhụrụ, bụ anyị azụmahịa nkà ihe ọmụma,
Dị ka otu onye nke kasị ọhụrụ ụlọ ọrụ dị na ahịa, iwu Motor ụlọ ọrụ na-mgbe na ịnọgide na-enwe nso na kọntaktị na ahịa iji hụ irè ụlọ ọrụ ngwọta. Anyị bụ ndị mpako na-enye ngwaahịa na ọrụ ọtụtụ mbụ na klas na ụdị.
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inye ọhụrụ, environmentally friendly na ala na-eri micromotor ngwaahịa ngwọta na-enyemaka ahịa ịga nke ọma.
Ntelligent akara na-eduga n'ọdịnihu!
Ọgụgụ isi ulo oru akara na-eme ka ụwa ọzọ environmentally friendly na oru oma!
Company Mgbaru Ọsọ
Bụrụnụ ndị na-ọkachamara nwere ọgụgụ isi akara usoro mwekota!
Iwu moto ka akwakọba ihe karịrị 10 afọ nke ahụmahụ na-n'ichepụta stepper Motors, na aghọwo a elu-tech enterprise n'ilekwasị anya na mmepụta nke stepper Motors na yiri eletriki akara usoro.
Anyị na-agba mbọ na-enyere ndị ahịa si dị iche iche ọrụ izute mkpa nke ọha mmadụ site ugbu a.
Foreign ahia ụlọ ọrụ ike.
Iwu MORTOR guzosie ike na-etinye n'ime mmepụta
German alaka ike Bremen Jinan alaka ike Hefei alaka ike
Construction nke ọhụrụ factory dechara na mmepụta malitere.
Nga saling support
Focus na ụlọ ọrụ na ọnọdụ, na-esi ọnwụ na ahịa na-agba mbọ ịzụlite na nchọpụta ọhụrụ ngwaahịa.
Oru oma na elu-edu ngwaahịa nnyefe
Mezue mmepụta na nnyefe nke ngwaahịa n'ime oge kwuru na nkwekọrịta
Mgbe ahịa support
Bịara n'Ezi Oge oru nkwado
Help ahịa na-edozi nsogbu ndị dị irè ojiji na oge mbụ
Mgbe ihe karịrị afọ iri nke ịrụsi ọrụ ike, anyị merie ndị ihu ọma nke ihe karịrị mmadụ 3,000 ndị ahịa, na ndị ọzọ karịa 850 ahịa karịa 5 afọ.
Ankert ka ghọtara na mmepụta nke Industry 4.0, ihe ọkachamara mmepụta, ma na-enye ihe karịrị 10,000 iche iche nke ngwaahịa nhọrọ izute mkpa nke ndị ahịa dị iche iche ọrụ.
Anyị nwere 26 technicians, 15 nke onye nwere ihe karịrị afọ 10 nke na-arụ ọrụ ahụmahụ. Anyị nwere 35 ahịa na ọrụ pesonel ndị rụrụ kpọmkwem ọrụ nkewa tupu ire ere, mgbe-ire, na mgbe-sales iji melite ogo nke imekọ ihe ọnụ.
Anyị nwere 2 ụlọ mmepụta ihe na 2 itieutom ke China. Na 2014, anyị na-ike a alaka na Germany. The zuru ụwa ọnụ warehousing ọrụ bụ naanị maka nchebe na oru oma nnyefe nke ngwongwo.
Anyị na-e-kwara na nnyocha na mmepe na upgrading anyị na ngwaahịa, na-enwe kwa afọ ego na nnyocha na mmepe karịa 10 nde yuan.
Changzhou iwu Motor ka mụtara isi teknụzụ nke ngwakọ stepper moto, na-adịgide adịgide magnet stepper moto, servo moto, brushless DC moto na moto mbanye na mwekota. The ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-ebu teknuzu nnyocha na mmepe, melite ngwaahịa arụmọrụ, na mgbe niile ịzụlite otutu ngwaahịa dị ka ahịa na ndị ahịa mkpa.
Close Loop Stepper Motor Driver , Digital Stepper Servo Driver , Néma 17 Stepper Motor Driver , CNC Stepper Motor Driver Kit , Néma 23 Stepper Motor Driver , Stepper Motor Driver ,